PSJTV | प्रदेशको नाम र राजधानीमा यस्तो विवाद
अहिलेसम्म प्रदेश ६ र प्रदेश ४ ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्न थालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा सांसदहरू पनि विभाजित छन् ।
सत्तारुढ संघीय फोरम र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् । कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला’ उत्तम हुने बताउँदै आएको छ । नेकपाले ‘जानकी’, ‘मिथिला’ वा ‘मिथिला–भोजपुरा’ बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज बनाउने भन्नेमा विवाद छ । तर, प्रदेश सभामा यी दुवै विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
प्रदेश ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चर्को छ । अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।
सांसदहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभामा पटकपटक माग गरेका छन् । तर, यसबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पेचिलो छ ।
सांसदहरूले पटकपटक माग गर्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैन । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
बम्जन आश्रममा सिआइबी, सिन्धुपाल्चोकपछि सिन्धुलीतर्फ
४६९ स्थानीय तहमा छैनन् डाक्टर
काठमाडौं: इरानको दक्षिण–पूर्वी भागमा भएको आत्मघाती बम हमलामा कम्तिमा २७ जना रिभोलुस्नरी गार्डको मृत्यु भएको छ । इरानी सरकारी संचारमाध्यमका अनुसार आक्रमणकारीले सिस्तान–बलुचिस्तान प्रान्तको खाश–जहेदान सडकमा रिभोलुस्नरी गार्डलाई बोकेको बसमा आक्रमण ...
काठमाडौं : हरेक फेब्रुअरी १४ मा युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ त ? कसरी यो चर्चित भयो ? प्रेम वा अनुभुतिको त्याग र वलिदानबाट सुरु भएको ...